पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् भदौ ६ गते शनिबारको राशिफल – Bannigadhi Today
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् भदौ ६ गते शनिबारको राशिफल
धनराज साउँद २०७७ भदौ ६, शनिबार ०७:१६
आज श्री शाके १९४२ बि।स।२०७७ साल भाद्र ६ गते शनिबार इश्वी सन २०२० अगस्त २२ तारीख भाद्र शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथी हस्ता नक्षत्र साध्य योग वणिज करण चन्द्रंमा कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा मृत्यु योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु गणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रदर्शन दोष ९चथाः० डोलेश्वर उत्सव,राष्ट्रिय धर्मसभा९दिवस ९ज्यो।प।सरोज घिमिरे०
तुला राशि ९र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते० अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । यात्रामा साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । गरीरहेको कार्य क्षेत्र समेत परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ ।